China Tattoo Inogadziriswa Kureba Huru Nemaoko Zororo Kumira Kugadzira uye Fekitori | MOLONG
Yakakwira mhando yeganda ruoko zororo.
Chinogadziriswa kubva pamatanho matatu akasiyana.
Nyore kutakura - Inotakurika
Inokodzera mune sutu kesi!
Mutengo Unonzwisisika - Makwikwi
Kunogara & Kunogara & Kwakasimba
Yakanaka Sarudzo yeTattoo Studio
Iyi inotakurika inogadziriswa nyanzvi tatoo chair inogona kugadziriswa pasina kubvisa chero zvikamu.
Iyo chest pad iyo yakazara zvakakwana kuitira kunyaradza kukuru kune vese varume nevakadzi.
Iyo chigaro, armrest, chipfuva pad uye headrest zvinokwanisika kuchinjika.
Item Rudzi: Tattoo Armrest
Chinyorwa: Metal + Faux Leather
Item Ruvara: Dema
Nhema Pad Pad: approx. 22 x 17 cm / 8.7 x 6.7 inch
Kureba Kwakachinjika: approx. 83-136 cm / 31.5-52.8 inch
Nyanzvi nyora nyowani armrest
Iwe unogona kugadzirisa kukwirira uye armrest munzvimbo dzakasiyana dzakasiyana.
Iyo ergonomic dhizaini inokutendera iwe kuti uigadzirise kune chero kona kuti iite chero chero tattoo basa.
Pushira bhatani uye uritenderedze seri neshure kukona yako yaunoda. Kana isiri pivot kana kona inongotendekera kumberi kana kumashure
Iyi armrest iri nyore kutakura yekufamba uye ye tattoo zviratidzo.
Inotyoka kuita zvidimbu zvitatu uye huremu hwakareruka uye hushoma huwandu
Iyi armrest zvakare yakasimba uye iri nyore kuchenesa.
Basa rinogadziriswa zvizere uye rinorema
- Yakapfava uye yakasununguka pad pemaoko, makumbo kana tsoka zororo.
- Ergonomic dhizaini inobvumidza iwe kuti uigadzirise kune chero kona (inopfuura 180 degree) kuti iite chero chero basa re tattoo.
- Inogadziriswa kukwirira kwezvakasiyana zvinodiwa.
-Puru uye yakapfava padhi yemaoko, makumbo kana tsoka zororo, ichiwedzera nyaradzo yemutengi.
- Tiraipodhi inomira inopa yakadzikama uye isinga tsvedza (Makumbo esimbi ane marabha magumo)
- Inotakurika uye inotakurika, nyore kuchengetedza kana kutakura
【Nyanzvi】 Nyanzvi yekuzorora ruoko rwekuzorora uye gumbo rekuzorora gumbo, rakapfava uye gobvu pad rinokupa nyaradzo yemaoko, makumbo uye tsoka zororo, zvinoita kuti nyora yako ishande zviri nyore.
Kureba Kunogadziriswa】 Kureba kunogona kuchinjika kubva pa65cm kusvika 125cm kuti ikwane zvaunoda zvakasiyana, zvinokupa iwe nevatengi vako chiitiko chikuru. Simba rekutakura rakasimba, iyo armrest stand inogona kupa rutsigiro rwakakwana kune vanhu vane huremu hwakasiyana
【Inosvikika】 Iyi tatoo ruoko rwekuzorora runogona kutsemuka, nyore kuchengeta uye kutakura, kukuchengetera imwe nzvimbo yekuchengetera kana iwe usingade katatu kadhi. Iyo padhi inokutendera iwe kugadzirisa anopfuura makumi masere padigiri kona kune chero tattoo basa.
【Anti-Skid】 Makumbo matatu esimbi nemakumbo erabha zvinopa kugadzikana kwekutema nyora, Anti-skid isina kukwenya pasi, inoshanda uye yakasimba. Yakanaka chigadzirwa chehunyanzvi che tattoo salon kana wega tattoo teki.
【One-On-One Service】 Kana iwe uine chero mubvunzo nezve zvinhu zvedu, ndapota taura nesu neemail. Isu tinofara kukubatsira iwe kugadzirisa dambudziko. Kunoshamisa kwevatengi sevhisi ndizvo zvatinoita!
Pashure: KingKong 3 Tattoo Cartridge Muchina
Zvadaro: Disposable silicone inogadziriswa tattoo cartridge grip (25pcs / bhokisi)
Adjustable Urefu Stainless simbi Tattoo Arm Re ...